रेड जोनमा परीक्षाको तयारी - Rastrakokhabar
रेड जोनमा परीक्षाको तयारी
एकाविहानै श्रीमतीको फोन आयो । कहाँ हुनुहुन्छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ ? कस्तो छ परीक्षाको तयारी ? श्रीमती जी को प्रश्न नसकिदै मैले भने म त ठमेलमा छु । घरबाट परीक्षा दिन काठमाण्डौ आएको म ठमेलमा भन्दा श्रीमती जी को शंखाको पारो एकै चोटी ३७६.६ डिग्री पुग्यो । विहान विहानै के खोज्दै पुग्यौ ठमेल ? परीक्षा दिन गएको बुढो तरुनीको खोजीमा ? मैले तिम्रो आवश्यकता पुरा गर्न सकिन भन्दै रिसाउन थालीन र स्पटीकरण दिदैमा घण्टा बित्यो ।
सरकारी जागिर खाने रहरले दोलखादेखी काठमाण्डौको यात्रा तय गरेको थिय म । कोरोना कहरले लामो समय बन्द भएको स्कुल भर्खरै आलोपालो रुपमा शुरु भएको थियो । स्कुलमा १ हप्ताको विदा स्वीकृत गरेर भर्खरै विवाह गरेकी श्रीमती घरमा छोडेर काठमाण्डौ यात्रा गरेको थिय । काठमाण्डौ बसेको सालोभाइकोमा बसेर परीक्षा दिने मेसो श्रीमतीले नै मिलाइदिएकी थिन । तर भर्खरै विहे गरेको १ हप्ता सालोकोमा कसरी बस्नु भैरहेको थियो । मन त थियो होटल तिर नै बसुँ तर श्रीमतीले माया गरिन वा उनी म माथी हावी भइन उनको भाइकोमा बस्ने व्यवस्था मिलाइन । तर लोकसेवाले मेरो पक्षमा निर्णय दियो । परीक्षा केन्द्र पर्यो सरस्वाती क्याम्पस, ठमेल । सालोभाइको बसाइ जडीबुटी भएकोले ठमेल सम्मको यात्रा कठिन थियो । फेरी भर्खरै देशमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले भइरहने आन्दोलनले मेरो यात्राको लागि लामो समय लाग्ने हुनाले ठमेल बसेर परीक्षामा सहभागी हुने योजना सहित ठमेल पुगेँ ।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय सहर ठमेल कोरोना पछि कस्तो भएको छ भन्ने हेर्न मन लागेको हो तर परीक्षामा समयमा मन वहकिन्छ की भन्ने डर कताकता लागिरहेको थियो । आइतवारबाट परीक्षा हुने भएकोले शुक्रवार साँझ नै ठमेल पुगेँ । काठमाण्डौमा तापक्रममा न्युनतम विन्दुमा प्रवेश गर्दै भए तापनि ठमेलको वातावरण तातीरहेको थियो । विदेशी पर्यटकहरुको संख्या न्यून भए पनि आन्तरीक रुपमा भिडभाँड बढी नै थियो । आउने जाने क्रम चलिरहेको नै थियो । म पहाडमा जन्मे हुर्केको मान्छे काठमाण्डौको त्यो जाडोमा केटी र महिलाहरुको खुलेको पहिरनले जाडो मलाइ मात्र हो की भन्ने लाग्थ्यो तर उनीहरुको साथमा रहेका पुरुषपनि टन्नै कपडा लगाइरहेको बाट केटीहरु हट हुन्छन भन्ने सुनेको मात्र मलाइ देख्ने बुझ्ने अवसर मिल्यो । परीक्षको तयारीमा रहेको म धेरै मन डुलाउन चाहिन ।
होटल पुग्ने वित्तिकै फक्राउदै गरेकी होटल साउकी छोरीले मन तानी । दिनमा एउटा अनलाइन क्लास पढेर सकेपछि दिनभर फ्री रहेकी उनी घरीघरी वेटरकी रुपमा मेरो रुममा पस्दा च्याप्प समाएर अठ्याउन मन लाग्ने खालकी स्वादिली थिन । यो जाडोमा पनि हल्का कपडा लगाएकी पुष्टिदै गरेको छातीले हेर्दैमा ४०० भोल्टको करेन्ट लाग्ने खालकी उनलाई परीक्षाको कारण म बाट जोगाएर राख्न सफल भयो या भनु कुनै अप्रिय घटना हुनबाट रोकियो । यस्ती राम्री युवति देख्दा त भर्खरै विवाह गरेर घरमा छोडेकी श्रीमतीको नि मतलव नहुदो रहेछ । ५ दिन ठमेल बसाइको क्रममा अक्सर खाना खाने समयमा र परीक्षा दिन जाने आउने समयमा मात्र म रुम बाहिर निस्किय । तर जतिजति म निस्कन्थ्ये त्यति त्यति नयाँ जोडि नयाँ उमंग सहित आउदै जादै गरेका हुन्थ्ये । होटल साहुलाइ ग्राहक संहाल्न भ्याइ नभ्याइ भैरहेको हुन्थ्यो ।
प्रेम नगरीको रुपमा परिचित कान्तिपुरको महत्वपूर्ण सहर ठमेलमा रहेर होटल व्यवसाय संचालन गरिरहेका बाग्लुङका स्थायी बासिन्दा हरि साहुसंग परिक्षा सकिएको साँझको अन्तरंग संवादको क्रममा उहाले अक्सर केही पाहुनालाई मात्र दिन रातको रुम दिने गरेको बताउछन । अक्सर जोडीहरु २÷४ घण्टा रोमान्स गरेर जाने र आफुहरुलाई त्यसबाट नै अत्याधिक फाइदा हुने उनको भनाइ छ । ठमेल बसाइमा थाहा भयो बजारमा खुलेआम यौन बिक्री भैरहेको छ । अन्य व्यवसाय फस्टाउन नसके पनि यस्तै व्यवसाय बाट कोरोनाबाट व्यहोरेको नोक्सानी उठाउने प्रयास गर्दै छन रेड जोनका व्यवसायीहरु ।
Previous Post	राष्ट्रिय एकता दिवसको औचित्य
Next Post	संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्ल